I-Sonos Hambisa: I-Sonos yeSomlomo yokuqala yeBhetri yangaphandle | Iindaba zeGajethi
USonos wazisa iimveliso ezininzi kwezi nyanga. I-brand isebenzisa ithuba lobukho bayo kwi-IFA 2019 ukusishiya ngoku nemveliso enomdla. Banikele nge Sonos Hambisa, Esisithethi esikrelekrele, nesandi esisemgangathweni, kodwa esinokusebenzisa kuyo yonke indawo. Olona tshintsho lunomdla kwinkampani, eqhubeka nokukhula ngale ndlela kwintengiso.
Isithethi esiya kuvakala sigqibelele ngalo lonke ixesha, ilungele ukusetyenziswa ngaphandle okanye ekuhambeni. I-Sonos Move imele isigaba esitsha senkampani, esishiya icandelo lasekhaya ngale ndlela ukusishiya nesithethi esifanelekileyo sokusebenzisa nangaphandle.
Inkampani iyothusa ngale mveliso, ngokungathandabuzekiyo eya kubhenela uninzi. I-Sonos Move ilapha ukuze iguqule intsimi yezipikha eziphathwayo ngesandi esikrelekrele nesinokuziqhelanisa, iibhasi ezinzulu ngokumangalisayo kunye neprofayile ebanzi yesandi. Ixhotyiselwe ukumamela ngaphakathi ngaphakathi kunye nesandi esinamandla ekuhambeni, sisithethi esine-in-one smart. Ukusukela thina Dlala iaudiyo ngeBluetooth, Eyokuqala uphawu ngale ndlela.
Ukongeza, ukuqinisekisa elona lizwi lilungileyo kunye nayo, inkampani iyangqina ukuba idibanise itekhnoloji yeTrueplay yokulungisa kunye ukuziswa kweTrueplay ngokuzenzekelayo. Oku kwenzelwe ukuba isithethi sihambelane ngokufanelekileyo nesandi kunye nokusingqongileyo. Ke ngoku kuxhomekeke kumzuzu, uya kulungelelaniswa ukuze usinike elona lungelo libalaseleyo. Akukho nto siza kuyenza.
I-Sonos Move inoyilo lwe-oval kwaye emnyama. Inkampani ibeke esi sithethi kuzo zonke iintlobo zovavanyo ukusenza isithethi esingaphandle esifanelekileyo. Le yinto ebonakalisiweyo kuyilo lwayo, olungakhange lufike kwiinkcukacha. Kodwa nangokuxhathisa kwayo. Le modeli inokuchasana nokuwa, ukothuka, imvula, ukufuma, uthuli, ukungcola, imitha ye-UVA kunye nobushushu obugqithisileyo, ukongeza kwinqanaba lokukhuselwa le-IP56.
Ibhetri yenye yamandla ale modeli, eyilelwe ukuba ihambe imini yonke. Njengoko inkampani isixelela, ibhetri yale Sonos Hambisa Iya kusinika ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10 zokudlala okuzenzekelayo ngentlawulelo enye. Ukongeza, ukuba siyisebenzisa ekhaya, siya kuhlala sikwazi ukubeka nokususa isithethi kwisiseko sokutshaja sangaphakathi. Ke kuyenzeka ukuba isoloko inxibelelana nayo, iqinisekisa ukuba ihlala ikulungele ukusetyenziswa. Indlela yokulala, yenziwe ngokuzenzekelayo xa ingasetyenziswa okanye xa ucofa iqhosha lamandla, igcina ibhetri ukuya kwiintsuku ezintlanu.
Olunye ulwazi olunomdla kule modeli kukuba ikokokuqala ukuba inkampani isishiye nabancedisi bamazwi ababini. Njengazo zonke iimveliso zeSonos ezihambelana nelizwi, iza noMncedisi kaGoogle kunye neAmazon Alexa eyakhelwe ngaphakathi. Ke ngoko, xa uyiqhagamshela kwiWiFi, uya kuba nakho ukwenza zonke iintlobo zemisebenzi, njengokudlala umculo, ukujonga iindaba, ukulawula izixhobo zekhaya ezi-smart, ukubuza imibuzo nokunye okuninzi ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho. Njengenxalenye yeqonga likaSonos, elibeka phambili ukhetho, linxibelelana neenkonzo ezingaphezulu kwe-100 zokusasaza (umculo, iincwadi zokumamela, ii-podcast nokunye okuninzi) kwaye uzilawule nge-app ye-Sonos, i-AirPlay 2 okanye ngokuthe ngqo kwiiapps zomculo.
Ukuba ufuna ukufumana le Sonos Move, ngekhe ulinde ixesha elide. Ukugcinwa kwayo kuvulekile namhlanje, Ke ungasele usenza esi sithethi sebrendi ngendlela elula. Kungenziwa kwiwebhusayithi yenkampani, njengoko sele beqinisekisile.
Ukuqaliswa kwayo kwihlabathi lonke kuya kwenzeka kule nyanga. Nge-24 kaSeptemba siyakukwazi ukuyithenga kwihlabathi liphela. Isungulwe ngexabiso lama-399 eeuros ezivenkileni. Ucinga ntoni ngesi sithethi siphuma kuhlobo lophawu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-Sonos Hambisa: Isithethi se-Sonos sokuqala sangaphandle sebhetri